Monk’s xenophobia | NEW BURMA MEDIA
October 1, 2013 — newburma
မည်သည့်အရာက ထိုကဲ့သို့ ထိန်းမရလောက်အောင် ဒေါသနဲ့ အမုန်းတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သနည်း…..?
အဖြစ်အပျက်အစက မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ မြို့လည်မှာရှိတဲ့ မူဆလင်ပိုင် ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်က စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြားရသလောက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စုံတွဲတစ်တွဲက ၄င်းတို့ရဲ့ လက်ဝတ် ရတနာကို ရောင်းချဖို့ အဲဒီမူဆလင်ဆိုင်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စပြောဆိုရာမှ ဈေးနှုန်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အချင်းများကြတယ်။ ထိုမှ အရှိန်မြင့်လာကာ ရန်ပွဲအသွင်သို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထို့နောက် အဆိုပါ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားဟာ ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံမှာ သေဆုံးသွားခဲ့တော့ ဘုန်းကြီး တွေက ထိုမူဆလင် ရွှေဆိုင်ကို စတင်တိုက်ခိုက်တယ်။ အဲဒီမတော်တဆ ဖြစ်ရပ်ကလေးက လူအုပ်ကြီး တစ်ခုလုံး အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်ရန် အားပေးလိုက်တဲ့ မီးပွင့်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒေါသကြီးနေတဲ့ လူအုပ် ကြီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်ဘဲ မူဆလင်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာ မှန်သမျှကို တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ ဖြစ်ပွားသော ပဋိပက္ခနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သုံးသပ်သည့်သဘောထား အမြင်များမှာ မတူကွဲပြားလျက်ရှိကြသည်။
သို့သော် အငြင်းပွားမှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ အရာကတော့ မြန်မာတွေရဲ့ အကြောက်တရားတွေပါပဲ။ မူဆလင်တွေဟာ မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ လျှင်မြန်စွာ ပြန့်နှံ့နေခြင်းက ၄င်းတို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို မြင့်တက်လာစေ တယ်။ မြန်မာတွေက မူဆလင်တွေကို နှိမ့်ချပြီး ကုလားဆိုသော အသုံးအနှုန်းနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းခေါ်ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ဘုန်းကြီးအိုတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဝီရသူက ဒီအကြမ်း ဖက်မှုတွေကို ထောက်ခံအားပေးနေတာပါပဲ။ ၄င်းသည် ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှု တွေကို ဖြစ်ပွားအောင် သွေးထိုးလှုံဆော်မှုနဲ့ အကျဉ်းချခံရသူဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က ရပ်တည်ပြီး မူဆလင်တွေကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူ့အပြောအဆို များနှင့် စာအုပ်များထုတ်ဝေခဲ့ကာ လူထုကြား ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မူစလင်လူဦးရေးကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော့်ကို မန္တလေးမှာရှိတဲ့ သူရဲ့ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှာ တွေ့ဆုံဖို့ သဘောတူခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ အပြော အဆိုက တည်ငြိမ်တယ်၊ ယဉ်ကျေးတယ်၊ ကျွန်တော်သုံးသပ်မိသလောက်ကတော့ သူ့ရဲ့စီမံကိန်းက သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေက သူ့အပေါ် ကြည်ညိုလေးစားပြီး သြဇာတိက္ကမ ကြီးလာအောင် လုပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်သူနဲ့ တွေ့တုန်းက သူ့ကို အစိုးရဆင့်ခေါ်စာနဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံပြီး အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုကြား တင်းမာမှုတွေကို ပပျောက်စေရန် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ရန်ကုန်သွားပြီး ပြန်ရောက်လာ ကစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဝီရသူ ဆွေးနွေးတော့ သူ့ရဲ့ မူဆလင်မူဝါဒကို လျော့ချပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်ကို ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရန်လိုတဲ့ လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ရှိ မူဆလင် လူနည်းစု ဦးရေကို အများဆုံး ၈% ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉% ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ချဖို့ အကြံအစည်ကတော့ အောင်မြင်ခဲ့ပုံ မရပါဘူး။
ဝီရသူက ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက သိပ်ပြီး နုညံ့ သိမ်မွေ့ကြပါတယ်။ လိုအပ်နေတာက ဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။”လို့ ဝီရသူက ဆိုတယ်။ ဒီမှာရှိတဲ့ မူဆလင်တွေက လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ကိုင်တာ ကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးတွေကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ အခုဆို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာတောင် နေရာယူလာကြပြီး၊ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားနေရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလိုမျိုး မူဆလင်နိုင်ငံအဖြစ် အဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ်လို့ သူက ထပ်လောင်း ပြောခဲ့တယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဒီမူဆလင် မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ အကြံအစည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ အထောက်အထားလို့ သူပြောတဲ့အချက်တွေ ရနေပြီ လို့ ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ ဝီရသူ အပြောအရ မူဆလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများကို အကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မ ပြုကျင့်ကြကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ စည်းစိမ်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများကို သွေးဆောင်အိမ်ထောင်ပြုနိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ အိမ်ထောင်ကျသည်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများအား အိမ်တွင် ပိတ်လှောင်ကာ အတင်းအဓမ္မ ဘာသာပြောင်းခိုင်းသည်ဟု မူဆလင်များအပေါ် စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မူဆလင်လူဦးရေက တိုးပွားနှုန်းအလွန်မြန်ဆန်ပြီး၊ တဖြည်းဖြည်းနေရာယူလာကြပြီ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ ပြီးတော့ အရှင်ဝီရသူက ပြူးတူးပြဲတဲနဲ့ တောက်ပသောစာအုပ်ကို ယူလာပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြတယ်။ အဲဒီမှာ ပါတာတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးက အကြမ်းဖက်သူလက်ထဲမှာ ကြောက်ရွံ့နေရပုံနဲ့ မူဆလင်တွေကို သွားရည်ကျနေတဲ့ ဝံပုလွေဆိုပြီး ကျောချမ်းဖွယ် တင်စားပြောဆိုထားတာကို တွေ့ရတယ်။
မင်းက မျိုးစေ့တစ်စေ့ကို ဘုရားထဲမှာ ပစ်ထားခဲ့ပြီဆိုပါစို့၊ အဲဒီမျိုးစေ့ကတဆင့် အပင်ကြီးထွားလာပြီး၊ ဘေးမှာရှိတဲ့အရာတွေကို ဖုံးအုပ်ဖျက်ဆီး သွားနိုင်ခြေရှိလာတဲ့အခါ အပင်မဖျက်ဆီးနိုင်ခင် မင်းက အရင် ခုတ်လှဲထားဖို့ လိုလာပြီ၊ ဒါကို ဥပမာထားခြင်းအားဖြင့် ဘယ်အရာမဆို သေးငယ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီး သတိ လက်လွတ်ဖြစ်နေလို့ မရဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
ဝီရသူက မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမှာ အဓိကနေရာက ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ အခိုင်အမာ ငြင်းဆိုနေသော်လည်း ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ သူရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ တိုက်ပွဲတွေကိုလည်း တားဆီးဖို့ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခဲ့တာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုလည်း နိုင်ငံတွင်းရှိ မူဆလင်လုပ်ငန်းများ၊ ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းလျက် ရှိသည်။ ၎င်း၏ နောက်လိုက်များကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်း သင်္ကေတ ရိုက်နှိပ်ထားသည့် ၉၆၉ ကပ်ခွာ တံဆိပ်များကိုလည်း မန္တလေးမြို့ရှိ ဆိုင်များတွင် ဖြန့်ချီပေးလျှက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်သည် ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် အေးဂျင့်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကြည်ကြည်မာဆိုသူနှင့် အဓိကဈေးအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေစဉ် သူမက ၉၆၉ တံဆိပ်များ ကပ်ထားသည့် ဆိုင်တန်းများကို ညွှန်ပြပြီး ထိုတံဆိပ်ကပ်ထားပါက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ သိနိုင်တယ်လို့ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ ခေါင်းက ပုဝါခြုံထားတဲ့ အထီးကျန်နေတဲ့ မူဆလင်ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင် မိန်းမတစ်ဦး ဖောက်သည်မရှိဘဲ ထိုင်နေရတာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ မေးကြည့်လိုက်တော့ ကြောက်နေပုံရပြီး လေသံတိုးတိုးနဲ့ ပြောပြတယ်။ သူမပြောတာကတော့ သူ့ဆိုင်ရဲ့ဖောက်သည်တွေက မိတ္ထီလာ အရေးအခင်းပြီးကတည်းက မယုံနိုင်လောက်အောင် ထိုးကျသွားတယ်လို့ ပြောတယ်။
“ကျွန်မက လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုပဋိပက္ခတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ စိတ်တောင်မကူးမိပါဘူး။ ကျွန်မဝတ်ထားတဲ့ ပုံစံကို မကြိုက်ကြလို့ ဖောက်သည်လျော့သွားတယ်လို့ပဲ ထင်မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် အုပ်ချုပ်ပုံကြောင့် အများသူငါလို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့လာပြီး တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေ ထကြွလာပုံရတယ်။ အခုလို အလျင်အမြန် အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး ပွင့်လင်းမှုတွေ လုပ်လာတော့ အနာဂါတ်အတွက် ပိုကောင်းပြီး အလားအလာကောင်းရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။”
(အင်္ဂလိပ်စာမူကို မူရင်းလင့်ခ်နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြပါသည်။)
• Monk’s xenophobia
An argument in this gold shop quickly escalated into widespread communal violence
Now [the Muslims] are taking over our political parties”
Ashin Wirathu Buddhist monk
But what is beyond dispute is the visceral fear and resentment of Muslims, openly expressed these days all over Burma. They refer to them with the derogatory term “kala”.
Ashin Wirathu (front) is urging Buddhists to boycott Muslim businesses
“We Buddhist Burmese are too soft,” he told me. “We lack patriotic pride.
“They – the Muslims – are good at business, they control transport, construction. Now they are taking over our political parties. If this goes on, we will end up like Afghanistan or Indonesia.”
Ashin Wirathu has amassedacollection of what he says is “evidence” of the evils of the Muslim community.
Burmese monks havealong tradition of political involvement
I do not want to be involved in this. Maybe they don’t like the way I dress”
So his followers have been distributing stickers printed with the number ‘969’, which symbolise elements of Buddhism, to shopkeepers around Mandalay.
Buddhist stalls are using stickers to identify themselves
“I amabusinesswoman. I do not want to be involved in this,” she said. “Maybe they don’t like the way I dress.”
« ဝက်သားတုတ်ထိုး လုပ်နည်း
ပျူမြို့ဟောင်းများ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ရန် ICOMOS စတင်စစ်ဆေး »